सम्झना घिमिरे काठमाडौं, १३ चैत
उनी निर्धक्कका साथ भन्छिन्, कुकिज खानुभन्दा अगाडि तपाईंको अधिकार हो त्यसबारे जान्न पाउने । कहाँबाट अनि कसरी उत्पादन भएको छ भनेर जान्ने । त्यसैले हामीले कुकिजको प्याकेजिङलाई पनि ध्यानमा राखेका छौँ ।
मौलिक शैलीमा फरक स्वादको उपाध्यायको कुकिजले आइडिया स्टुडियोका निर्णायकहरूलाई पनि लोभ्यायो । निर्णायक तथा गायिका आनी छोयिंग ड्रोल्मा कुकिज खाँदै तारिफ गर्दै भन्छिन्, तपाईंको यो कुकिज म यहाँ मात्र होइन, घर लगेर सबैलाई खुवाउँछु । साँच्चै कल्पना पनि गरेकी थिइनँ यतिधेरै मीठो होला भनेर ।
सस्तो र आफ्नै वरपरका प्राकृतिक वस्तुहरुबाट बनाइएको किटनाशक मलले स्वास्थ्यमा पनि फाइदा पुर्‍याउँछ अनि भएनन् त किसान खुसी ? किसान मात्र होइन, मलबाट फल फलाएर स्वस्थ कुकिज खुवाउने सपना बोकेकी उपाध्याय पनि मितेस श्रेष्ठ र सुप्रिम थाको योजना देखेर दंगै छन् । उ
पाध्याय, था र श्रेष्ठ हामीलाई कसरी स्वस्थ खानेकुरा प्रवाह गर्ने भनेर लागिपरिरहेका छन् । खानाबाट स्वस्थ त पक्कै हुन्छौँ हामी सबै । तर, स्वस्थ खाएर शरीरलाई सुहाउने पोसाकमा ठाँटिँदै हिँड्ने रहर कसलाई पो नहोला र ?
यसका लागि परियारले बजार पनि अध्ययन गरिसकेका छन् । उनी भन्छन्, उपत्यकामा हजारौँ ग्राहकहरू दिनभर कहाँ कपडा सिलाउन दिने भन्दै भौँतारिइरहेका हुन्छन् । तिनै ग्राहकहरूलाई यो एपबाट सजिलै टेलरिङ सुविधा दिन सकिन्छ । एपमा टेलर व्यवसायीहरू पनि जोडिने हुँदा व्यवसायी एकत्रित हुन्छन् । यसले बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराउँछ अनि ग्राहकलाई कपडा कहिले बन्छ भनेर बस्नुपर्ने बाध्यता पनि हुँदैन ।
आइडिया स्टुडियोले हरेक १५ दिनमा युवाहरूलाई आफ्नो सिर्जना प्रस्तुत गर्दै उनीहरूको सोचलाई उद्योगसम्म पुर्‍याउने बाटो तय गर्दै आएको छ ।
माथि उल्लेखित योजनाहरू पनि आइडिया स्टुडियो सिजन ४ का सोसल इम्प्याक्ट राउण्डका प्रतिस्पर्धीहरूको हो । प्रतिस्पर्धीहरूको सिर्जनालाई सम्मान गर्दै आइडिया स्टुडियोले प्रत्येक राउण्डका विजेताहरूलाई ५ लाख रुपैयाको ब्यवसायीक लगानी गर्दै आएको छ। आइडिया स्टुडियोमा अहिले २४ जना प्रतिस्पर्धामा छन् ।
बन्यो ढकालको प्यानल, भावी अध्यक्षलाई यस्तो छ सन्देश
सक्नेले सुविधा नखोज्नू, किस्ता तिर्नू : उद्योग वाणिज्य महासंघ
काेरोनाको प्रभाव : औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र धराशयी बन्दै
व्यवसायीलाई शतप्रतिशत ब्याज छुट : सरोकारवालाकै बाझियाे मत
नृत्याङ्गना नीलमका ४ कमजोरी